AY Productions သည်လူကြိုက်များသော Live Events များအတွက် Pliant Technologies 'CrewCom သို့ပြောင်းလဲသွားသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » AY Productions များသည်လူကြိုက်များသော Live Live ဖြစ်ရပ်များအတွက် Pliant Technologies 'CrewCom သို့ပြောင်းလဲသွားသည်
ရိုးရှင်းသောတည်ဆောက်ပုံနှင့်ကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေးစနစ်များသည် AY ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်းသက်သေပြသည်
GAINESVILLE, FL, မေလ 27, 2020 - AY Productions၊ အသံနှင့် coms အထူးကုများသည် Pliant Technologies ကကြာသပတေးနေ့ညဘောလုံးပွဲ (TNF)၊ AFC ချန်ပီယံ၊ Charleston ရှိဒီမိုကရက်တစ်ဆွေးနွေးပွဲ၊ မာစတာ၊ ယူအက်စ်ပွင့်လင်းဂေါက်သီး၊ PGA ချန်ပီယံ၊ ကမ္ဘာ့စီးရီး၊ NFL မူကြမ်းနှင့်စသည်တို့ပါဝင်သောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ခိုင်မာသောဆက်သွယ်ရေးများကို CrewCom ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုပေး Super Bowl AY Productions မှ coms အင်ဂျင်နီယာ Aaron Young နှင့်အလွတ်တန်း coms အင်ဂျင်နီယာ Andy Rostron တို့သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ကြာသပတေးနေ့ညဘောလုံးပွဲ (TNF) တွင်စတင်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
နည်းပညာများတိုးတက်လာခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုများသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ရိုးရာ analog wireless system ထက်များစွာကြီးထွားလာသည်။ အစားထိုးကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကိုရှာဖွေစဉ် CrewCom 900MHz စနစ်ဖြင့်သူတို့ရှာဖွေနေသည်ကိုအတိအကျတွေ့ရှိခဲ့သည်။
TNF အတွက် AY Productions သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကျယ်ပြန့်သောလွှမ်းခြုံသောဇုန်တစ်ခုဖြစ်ရန် Radio Packs 16 (RPs) နှင့် transceiver (antenna) ၁၄ ခုကိုဖြန့်ချိသည်။ ယန်းက“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RF coms စနစ်တစ်ခုလုံးက CrewCom ပဲ။ တတိယပါတီကွန်ယက်ပစ္စည်းမလိုအပ်ဘူး။ “ အရာအားလုံးဟာကြီးမားတဲ့အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂေဟစနစ်တစ်ခုထဲမှာပါဝင်တယ်။ အင်တင်နာများသည်ဖိုင်ဘာကြိုးတစ်ကြိုးတည်းဖြင့်ဆက်သွယ်သည်၊ ထို့ကြောင့်အားကစားရုံကိုပတ်ပတ်လည်ရှိသူများကိုလွှမ်းခြုံရန်လိုအပ်သည့်နေရာတွင်နေရာချထားသည်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ အသုံးပြုသူများသည်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ Locker ခန်းများနှင့်ကုန်တင်ကားများအပါအ ၀ င်ဇုန်မှဇုန်အထိလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။
Young နှင့် Rostron တို့အတွက်ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာစနစ်၏လွယ်ကူစွာဖြန့်ကျက်မှုဖြစ်ပြီးမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အထူးအရေးကြီးသည်။ Rostron က“ CrewCom ကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေတယ်။ အဓိကအားဖြင့်ထုတ်ကုန်သုံးခုဖြစ်တဲ့ intercom, audio သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ wireless PL” လို့ပြောတယ်။ “ အရင်ဖွဲ့စည်းပုံဟောင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအားကစားကွင်းအတွင်းနဲ့အပြင်နှစ်ခုလုံးကို RF ပစ္စည်းကိရိယာများထိန်သိမ်းမည့်နေရာများရှိ Analog အသံများကိုသယ်ဆောင်ရပါတယ်။ အခုထရပ်ကားကနေမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာက transceiver တွေပါ။ ထိန်းချုပ်မှုယူနစ်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကြီးမားသောအားသာချက်ဖြစ်သောဒြပ်ပေါင်းအတွင်း၌တည်ရှိသည်။ ထို့အပြင် CrewCom packs သည်အခြားထုတ်လုပ်သူများ၏ intercoms များထက်အသံအရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
Young ကပြောကြားသည်မှာ CrewCom ၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ system နှင့် packs များကို supply CrewWare software ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်မှုထရပ်ကားမှဗဟိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ “ ဒီစနစ်ကိုထုတ်လုပ်ရေးဌာနရဲ့ဌာနအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖြန့်ထားတယ်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ရှိပြီးကျွန်ုပ်စားပွဲပေါ်မှကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်စီမံနိုင်သည်။ ထရပ်ကားမှအရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိစေသည်။ အထူးသဖြင့်ရေဒီယို packs များသို့မဟုတ်အခြေစိုက်စခန်းများသို့တိုက်ရိုက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ရန်မလို။
CrewCom စနစ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း Young နှင့် Rostron တို့သည် Pliant အဖွဲ့ထံမှရရှိသောဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုသဘောကျနှစ်ခြိုက်ခဲ့ကြသည်။ “ Pliant Technologies မှ Art Gonzales သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကြီးမားသောအထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ TNF အတွက်ဒီစနစ်ကိုသူနဲ့သူနဲ့သူ့အဖွဲ့တွေနဲ့နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူဆီကရရှိတဲ့ထောက်ပံ့မှုကတော့မတူနိုင်ဘူး။
ဟူစတန် TNF ဂိမ်းတွင် AY Productions သည် Pliant Technologies ၏ sync function ကို သုံး၍ တစ်ပြိုင်နက်တည်းတပ်ဆင်ထားသော CrewCom စနစ်နှစ်ခု၏ပထမဆုံးအကြီးစားထပ်တူပြုခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ CrewNet ဆက်သွယ်မှုကိုလက်ရှိ NRG အိမ်စနစ်မှပေးပို့ပြီးဂိမ်းထုတ်လုပ်မှုများတွင်အသုံးပြုသည်၊ AY Productions ထိန်းချုပ်ရေးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဤအချက်သည် RF frequency ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်စနစ်နှစ်ခုစလုံးအချင်းချင်းချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
သူတို့အဖွဲ့သည်၎င်းတို့၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက် CrewCom စနစ်ကိုဆက်လက်အားကိုးနေရန်စီစဉ်နေသည်။ CrewCom ကိုအနာဂတ်ပြပွဲတွေမှာပေါင်းစပ်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ပြပွဲတစ်ခုစီအတွက်ကိရိယာအစုံအလင်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ခြင်းသည်ဤရှုပ်ထွေးသောစီမံကိန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားအချိန်များစွာသက်သာစေသည်” ဟု Rostron ကပြောသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် CrewCom သည် coms နည်းပညာကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ဤစနစ်ကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူပျော်ရွှင်မှုမရှိခဲ့ပါ။
Pliant Technologies ကအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.plianttechnologies.com.
Pliant Technologies ကအကြောင်း
Pliant ရိုးရှင်းသော Out-of-the-box ကို configurations ထံမှထိုကဲ့သို့သောထုတ်လွှင့်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအသံပြဇာတ်ရုံနှင့်များစွာသောပိုပြီးအဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အကြီးစားဒီဇိုင်းများအထိပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ CoachComm ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွဲပြားခြင်းနှင့်အမျှ Pliant တော်လှန်ရေးမိုဃ်းသက်မုန်တိုင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးလူသိများသည်® 40 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက်နေ့စဉ်အသုံးပြုခဲ့သောကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်, ။ Pliant အားကစားနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စျေးကွက်သို့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးဖြေရှင်းချက်ပေးတစ်ခုကျယ်ပြန့်ကုမ္ပဏီသမိုင်း၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပြီး, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီရဲ့အစဉ်အလာမှဆက်ကပ်အပ်နှံစက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပါဝင်သည်။ , အားကိုးတာရှည်ခံများနှင့်လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုဖြစ်ကြောင်းဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးဆဲ CoachComm အရေးပါဆက်သွယ်ရေးဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
AY ထုတ်လုပ်မှု crewcom Pliant Technologies က 2020-05-27
ယခင်: DPA က 4097 XNUMX Micro Shotgun Microphone နှင့် Interview Kit ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
နောက်တစ်ခု: Remote Production နှင့် Group Editing Workflows များကို Enable လုပ်ရန် EditShare နှင့် Adobe ပူးပေါင်းပါ